Brazil oo ay gilgileen banaan-baxyo lagaga soo horjeedo Madaxweyne Bolsonaro. - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Brazil oo ay gilgileen banaan-baxyo lagaga soo horjeedo Madaxweyne Bolsonaro.
On Jun 29, 2020 917
Addis Ababa june 29,2020 (Senee 22,2012 T.I) (FBC/SOMALI)-Dibadbaxayaal ka socda dalka Brazil iyo daafaha adduunka ayaa isu soo baxay si ay u dhalleeceeyaan madaxweyne Jair Bolsonaro wax ka qabashadiisa cudurka faafa daran ee coronavirus, iyadoo dalka Latin Amerika uu diiwaangeliyay toddobaadkiisii ​​ugu xumaa marka loo eego kiisaska cusub.
Mudaaharaadyada “Jooji Bolsonaro”mudahaardyada ayaa lagu soo bandhigay khadka tooska ah iyo wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Brazil iyo in kabadan 20 dal oo kale maalintii axada, iyagoo dalbanaya is casilaada hogaamiyaha garabka midig waxayna ugu yeedheen inuu ku xadgudbayo dimuqraadiyada.
Dalka Braziil ayaa laga diiwaan galiyay tiradii ugu badanayd ee caabuqa feyraska koroona iyada oo la diiwaageliyay 259,105 muddo hal maalin ah ilaa iyo axadii, sida lagu sheegay xogta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi.
Brazil ayaa sidoo kale sheegtay in ay diiwaan geliyeen ee tiradii dhimashada ee ugu badnayd todobaadkii labaad iyada oo ay feyraska u dhinteen todobaadkan 7,005 qof, halka ay wax yar uun ka hoosayso rikoodhkii usbuucii hore oo ahaa 7,285.
Iyada oo in ka badan hal milyan oo kiisas ah la diiwaangeliyay islamarkaana ay feyraska u dhinteen 57,622 oo qof.
Brazil ayaa ay ku habsatay dhibaatadii ugu darnayd ee kasoo gaadha feyraska iyada oo noqotay dalka labaad ee kusoo xiga maraykanka.
Bolsonaro, ayaa ugu yeedhay coronavirus “hargab yar”, ayaa dhalisay cadho weyn oo ahayd sida uu waajahay dhibaatada iyo sii wadistiisa diidmada ku saabsan cudurka dilaaga ah ee dadka ugu badan Laatin America.
banaan-baxayaasha ayaa dalbanaya in uu iscasilo Madaxweyne Bolsonaro.
Xisbiyada Bidixda iyo Dhaqdhaqaaqyada Bulshada ayaa Mudaaharaadyo ka dhan Madaxweyne Bolsonaro iyo guddoomiyaha Magaalada Rio de Janeir Witzel Amidst, kula biiray dadka banana-baxayaasha ah iyaga oo soo bandhigay haldhigyo ay ka mid ahaayeen ‘’jooji dafirida’’
Dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay soo celinta xidhoodhkoodii…
Midowga Afrika oo laalay xubinnimadii dalka Mali
Sucuudiga oo difaacay go’aan uu soo saaray oo ku aadan mugga sameecadaha…
Qatar oo shaacisay lacagta ay ku bixineyso dib u dhiska Gaza
Dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay soo celinta…
Sucuudiga oo difaacay go’aan uu soo saaray oo ku aadan…